I-Realme 3 Pro iya kuphehlelelwa ngokusesikweni ngalo Aprili 22 | I-Androidsis
I-Realme 3 Pro izakwaziswa ngokusesikweni nge-22 ka-Epreli ngokusemthethweni
Olona khuphiswano lomeleleyo kwi I-Redmi Qaphela i-7 Pro, i Realme 3 Pro, ibhengezwe e-India kule nyanga. Kungenxa yokuba isimemo esisemthethweni se-smartphone sele sivelile ukuba bekuswitiwe kwaye kucinywe yi-CEO yeRealme Madhav Sheth kungekudala emva kokuya esidlangalaleni.
Umvavanyi utyhila ukuba inkampani iya kubamba Yazisa umcimbi weRealme 3 Pro eIndiya ngo-Epreli 22.
Umsitho uza kuqala nge-12: 30 PM (ixesha lendawo e-India) ngalo mhla. Amajelo eendaba asekuhlaleni akwaRealme awukaqinisekisi umsitho weRealme 3 Pro emva kokuvuza.
Isicatshulwa 'sokuVusa ngokukhawuleza' esiboniswe kwiposta engentla sicebisa ukuba isixhobo siya kubonelela ngokusebenza okuphezulu. Ukongeza, u-Sheth wayesandula ukukhupha i-tweet ebonisa umdlalo we-Fornite osebenza kwi-Realme 3 Pro. I-chipset ye-Snapdragon 710, ebonelela nge ukwenza Imizobo eyoyikekayo yemidlalo, iya kuyinika amandla iselfowuni.
I-Realme 3 Pro inokuba njalo ifowuni yokuqala yenkampani ukuba ifike ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Ezinye izinto ezinamahemuhemu efowuni siscreen se-IPS LCD esikwi-6.3-intshi, ikhamera yangaphambili ye-megapixel engama-25, i-16 + 2 MP ngasemva, kunye nebhetri ye-4.000 mAh. Kukwacingelwa ukuba inokuxhotyiswa nge-megapixel efanayo eyi-519 ye-IMX16 yekhamera yesixhobo esona siphezulu sekhamera esikhoyo OnePlus 6T.
Uluhlu oluphakathi luzakufika njengendlalifa ye- Realme 2 Pro ukusukela ngoSeptemba 2018. Le yokugqibela inescreen se-6.3-intshi ye-FullHD + IPS LCD, iSnapdragon 660, ukuya kuthi ga kwi-8GB ye-RAM, i-128GB yendawo yokugcina yangaphakathi, ikhamera ye-selfie ye-16-megapixel, ikhamera ye-16-megapixel + 2-megapixel kunye nebhetri ye-3,500 mAh.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme 3 Pro izakwaziswa ngokusesikweni nge-22 ka-Epreli ngokusemthethweni
Sharp sele ibonisa uyilo lwe-smartphone yayo esongwayo